black jack - hitako linda omaly
no aostralia dia manana olana filokana
no atlantis manana poker efitra
Any ny United Fanjakana sy ny mpandraharaha ao ambadiky ny Park Lane Club London efa namely amin'ny lamandy £1.8 tapitrisa ($2.2 tapitrisa) araka ny Filokana ny Kaomisiona mpandrindra tapa-kevitra fa ny toerana dia tsy ampy hanaraka ny anti-famotsiam-bola sy ny andraikitra ara-tsosialy ny fomba fiasa.
Ny regulator nampiasa ny 11 septambra gazety ny tsipiriany fa efa takin'ny ny sazy manohitra Silverbond Orinasa Voafetra manaraka ny fanadihadiana lalina sy ny censure efa koa tsoratra ofisialy fampitandremana ary koa ny koa ny toe-piainana ny London-ny foibeny mpandraharaha ny tany-monina casino fahazoan-dalana black jack - hidina main street. Swanky toerana: Hita ao anatin'ny Hilton Park Lane trano fandraisam-bahiny ao am-po ny renivohitra ny manokana Mayfair manodidina, ny roa-tantara Park Lane Club London dia tsy miankina-mpikambana toerana ny fanatitra iray fifantenana ny faran'ny avo-blackjack, roulette sy baccarat lalao amin'ny ambony indrindra amin'ireo tsatòka hatramin'ny £100,000 ($124,700). Punters mety ihany koa ny manana fitambarana elektronika roulette sy ny jackpot slots ary koa ny trio tsy miankina lalao salons tanteraka amin'ny ny tao-trano fisakafoana sy ny zava-pisotro asa fanompoana. Ny tsy fahampiana amin'ny antsipiriany: Ny Filokana Vaomiera nanambara fa efa voasazy ny London fananana taorian'ny famantarana ny isan'ny 'andraikitra ara-tsosialy' ny tsy fahalavorariana anisan'izany ny tsy fahombiazana amin'ny ho afaka ampy hamantarana 'ny tondro ny mety ho olana filokana' toy ny herisetra mpanjifa ary koa ny punters mangataka mba hampitombo ny vola izay mety ho napetraka amin'ny alalan'ny maso. Ny Britanika regulator nilaza fa mpiasa ao amin'ny Park Lane Club London nanana koa nampiseho ny anti-famotsiam-bola ny tsy fahampiana amin'ny alalan'ny tsy milaza antsipirihany mikasika ny fomba toy izany ny politika dia ho ampiharina sy ny 'tsy hanatanteraka kokoa noho ny fahazotoana amin'ny 61 mpanjifa.' Mpiasa fananarana: Toy ny ampahany ofisialy ny fanapahan-kevitry ny tsirairay, ny Filokana Vaomiera nilaza fa efa ankoatra polo avy ofisialy fampitandremana ho roa Park Lane Club London manokana ny fitantanana ny mpihazona ny fahazoan-dalana miaraka amin'ny fampahafantarana ny duo fa 'izy ireo dia tsy maintsy manatsara ny firaketana an-tsoratra amin'ny fiarovana ny mpilalao sy ny fisorohana ny famotsiam-bola.' Vakio ny fanambarana avy amin'ny Filokana Vaomiera.. black jack - hitako linda omaly.
"Ny Filokana ny Vaomiera dia manaiky fa ny fahazoan niara-niasa nandritra ny dingana rehetra fandinihana azy, nanaiky ny fahadisoana tamin'ny mialoha ny fanombanana ny fanjakana sy nanolotra ponenana ara-bola miaraka amin'ny famintinana ny asa izany dia manomboka maka no aostralia dia manana olana filokana. Izany dia nahitana ny fanendrena fanampiny ny mpiasa mba hanohanana ny amin'izao fotoana izao famotsiam-bola ny fitaterana ny mpiandraikitra." no atlantis manana poker efitra.